● Zvigadzirwa zveMagetsi ● Yakagadziriswa Hunhu ● Inoshanda Sevhisi
3E Engineering Corporation Limited chitoro chimwe-chinotungamira mavhavha emagetsi maindasitiri mugadziri uye mutengesi muChina yakavambwa muna 2003, 3E zvinoreva zvigadzirwa zvemagetsi, hunovimbiswa mhando, basa rinoshanda. Isu tinobatanidza R & D, kugadzira, kusanganisa zviwanikwa uye basa rekutengeserana kuita rimwe. Kwemakore gumi nemasere, isu takatsunga kutsvaga mhinduro dzevatengi vedu uye nekupa basa rehunyanzvi maererano neesevha akajairika uye akasarudzika mavharuvhu.
Tine nzvimbo ina dzakachengetedzwa zvakanaka: nzvimbo yekushambadzira, nzvimbo yekutengesa cheni, nzvimbo yekugadzira uye yekubatanidza nzvimbo. Imwe neimwe inoita mabasa ayo ega pazvinhu zvakasiyana asi inoshanda seinjini ina dzine simba, kutyaira 3E kumberi munzira imwechete - kupa zvigadzirwa zviri nani uye sevhisi kune vatengi vedu.
Yedu bhizinesi chiyero chiri kusanganisira Kugadzira, Dhizaini uye kuumba, Valve stocking, kuisa mazita nekurongedza, Valve actuation, kugadzirisa uye kugadzirisa, Pane saiti rutsigiro nezvimwe….
Yedu kunyanya zvigadzirwa zviri kusanganisira mavhavha ese ebhora mavharuvhu (saizi: 0.5 "kusvika ku56", kumanikidza: 150Lb kusvika 2500Lb), mavhavha egedhi (saizi: 0.5 "kusvika 60", kumanikidza: 150Lb kusvika 2500Lb), globe repasi (size: 0.5 "Kusvika 24", kumanikidza: 150Lb kusvika 4500Lb), tarisa mavharuvhu (size: 0.5 "kusvika 60", dzvinyiriro: 150Lb kusvika 2500Lb), mavharuvhu (kukura: 0.5 "kusvika 36", kumanikidza: 150Lb kusvika 2500Lb), mavharufuru mavharuvhu (saizi: 2 "kusvika 48", kumanikidza: 150Lb kusvika 900Lb), strainers (size: 2 "kusvika 36", kumanikidza: 150Lb kusvika 900Lb) uye fittings pamwe nekugovera zvigadzirwa zvakagadzirwa. nemaindasitiri zviyero, zvinosanganisira ANSI, API, BS, DIN, JIS, GB uye JB. 3E mainjiniya inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzesimba rekugadzira, kemikari uye petrochemical, oiri uye gasi, simbi, kuvaka ngarava, mushonga, uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza maindasitiri.support neakasimba tech timu uye timu ine hunyanzvi yekutengesa, zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa zvakanaka ku USA, Mexico, Italy, Brazil, South Africa uye Middle East nezvimwewo …… .. izvo zvinogutsa vatengi vedu nemhando yepamusoro uye nebasa rakanaka.
Isu tinofunga zvakanyanya kupfuura cusomters. Munguva yedu yekufambisa bhizinesi, isu takamisa hukama hwakanaka kwazvo nevatengi,. Isu tinogara tichirwira kuita kukosha-kuwedzerwa kune vatengi vedu, Isu tinofunga zvinodiwa nevatengi nezvatinofarira seyedu, Kuti tivandudze mhando nemasevhisi nguva dzese chinangwa chedu, Tinogona kupa mitengo inonzwisisika nemitemo yekubhadhara uye kuendesa nekukurumidza, Ndakatarisira kushanda nevamwe vatengi pasi rese kuti vagadzire kukosha pamwechete.